Monday November 26, 2018 - 11:16:07 in Wararka by Warsheekh Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerarkii qaraxyada ku bilaawday ee saakay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug,kaasi oo lagu qaaday Xarunta Nin lagu magacaabi jiray Cabdiweli Cali Cilmi Yare,iyadoona weerarka lasoo afjaray.
Xarunta la weeraray oo ku taalla koonfurta Gaalkacyo,isla markaana uu lahaa Cabdiweli Cali Cilmi Yare,taasi oo wax lagu bari jiray dad farabadan oo isugu jiray Dhalinyaro iyo Haweyn ayaa waxaana haatan ku sugan Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaan ku dhintay 20-ruux oo isugu jirey dadkii xarunta ku sugnaa iyo Ciidamadii ilaaladda u ahaa Ninka lagu magacaabi jiray Cabdiweli Cali Cilmi Yare.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas,waxaana ay sheegeen inay ku dileen Nin sheegtay Nabanimo,isla markana u gefay Nabigeena Muxamed NNKH.
Cabdiweli Cali Cilmi Yare ayaa Caanka ahaa Gobolka Mudug iyo Guud ahaan Soomaaliya,waxaana uu horay u soo duubay muuqaalo uu qaarkood ugu gefay Nabigeena Muxamed NNKH.